Cunto: Sidee Wiki uga shaqeynayaa luuqado kala duwan?
Oliver King, oo ah Simalt Maamulaha Guusha Macaamiil, ayaa sheegay in Wikipedia uu leeyahay macluumaad ballaadhan, maqaallo, iyo luuqado kala duwan, tifaftirayaasha waxaa lagu dhiirigelinayaa inay abuuraan maqaallada maqan ee kuyaalgan weyn ee weyn . Waa ammaan in la yidhaahdo Wikipedia waxaa ku jira in ka badan saddex boqol oo luqadood, laakiin badankoodu waa kuwo aan dhammeystirnayn oo yar. Dadka ka socda adduunka oo dhan waxay booqdaan Wikipedia maalin kasta waxayna akhriyaan in ka badan 300 oo qoraal ah - bayer bepanthol tatuaje. Qaar ka mid ah waxay raadiyaan maqaallo qaas ah iyo sheeko qoraal ah oo ay qoreen boqolaal kun oo qorayaal qorayaal ah oo mas'uul ka ah dhisidda iyo ilaalinta buuggan caan ah oo bilaash ah. Qeybaha soo-galootiga badanaa waxay raadiyaan maqaalada ku qoran luuqadda Ingiriisiga, iyo luqadaha kale ee ku jira Wiki 30 milyan oo galitaan ah.
Dimoqraadiyad u yeelashada helitaanka aqoonta
Si loo caawiyo qoraaga iyo tifaftirayaasha bulshooyinka kala duwan waxay qiimeeyaan maqaallada maqan, khubarada kumbuyuutarka ee Wikimedia Foundation iyo Stanford ayaa si guul leh u abuuray qalab. Mid ka mid ah ayaa ka caawiya inuu tilmaamo qodobbada muhiimka ah ee aan weli la heli karin luqad gaar ah. Tifaftirayaasha ayaa markaa isticmaala talooyinkan si ay u sameeyaan qoraallo cusub. Haddii tifaftirayaasha iyo qorayaashu ay ku hadlaan luqado badan, ka dibna raadinta maqaallo ku qoran luuqad labaad oo u turjumaya luqadda maxaliga ah ee loogu talagalay akhristayaasha Wikipedia waa mid aad u fudud.
cilmi-baarayaasha Wikimedia Foundation Leila Zia iyo Ellery Wulczyn ayaa iskaashi la sameeyay ardayga jaamacada Stanford ee Robert West si ay u soo bandhigaan warbixinta Shirka Caalamiga ah ee Wide Webka, Montreal. Sida laga soo xigtay, Wikipedia waxaa ku jira xog aad u ballaaran, waxaana jira xiriir adag oo dhexmara maqaalkiisa
Cilmi-baadhayaashu waxay bilaabeen inay abuuraan liis ay ku qoran yihiin luuqado kala duwan iyo iskuday-tixraaca liisaska si ay u ogaadaan qodobada ay maqan yihiin luuqadaha. Kadibna waxay ku qiyaaseen muhiimadda dhammaan maqaallada maqan ee ku salaysan juquraafi ahaan iyo dhaqan ahaanba. Waxay ujeedadoodu tahay inay daabacaan maqaasha maqan sida ugu dhakhsaha badan ee suurtagalka ah iyo si ay u noqdaan kuwo ka wanaagsan.
Cilmi-baarayaashu waxay tijaabiyeen qadarinta iyagoo leh tijaabo badan. Waxay bilaabeen mashruucan in ka badan 4 malyan oo maqaallo ah oo lagu qoray luqadda Ingiriisiga waxayna ogaadeen in in ka badan 1.5 malyan oo maqaari ah ay maqan yihiin qaybta Wikipedia ee Faransiiska. Khubarada ayaa markaa doortay 300,000 oo ah qoraallo muhiim ah oo Ingiriis ah waxayna tarjumeen afka Faransiiska. Maqaalkani wuxuu u qaybsamaa saddex kooxood oo ka kooban 100,000 oo maqaalo oo kasta oo loo wareejiyay tifaftirayaasha ugu khibrad badan. Dhibaatada tijaabadu waxay ku lug leedahay laba kooxood oo ka kooban lix kun oo tifaftirayaal iyo qorayaal kuwaas oo sameeyay dhowr luuqadood oo luuqadaha Faransiis iyo Ingiriis ah laba iyo toban bilood ka hor intaan tijaabadu dhammaato. Bishii Juun 2015, dhammaan tifaftireyaasha waxay heleen email iyaga oo tilmaamaya maqaallada maqan ee gaarka ah, waxaana la weydiistay inay turjumaan liiska dhamaystiran ee qoraallada Ingiriisiga ilaa luuqada Faransiiska. Hal bil ka dib, khabiiradu waxay heleen maqaalkii maqnaa oo ay ogaadeen in ay kordhin karaan heerarka abuurista beeraha. Iyadoo lagu salaynayo dhammaan natiijooyinkaas, Wikipedia ee Wikipedia ayaa soo saaray qaar ka mid ah qalab tijaabo ah oo tifaftirayaasha iyo qorayaasha ay ka heli karaan barashada luqadaha gudaha iyo inay tilmaamaan gelitaan gaar ah.